Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana ao Frederic Chopin | Trent Reznor - Fikarohana momba ny vatana teraka
Notohanana tamin'ny: Ahtun Re
Chords of Chopin & Nail Nine Inch
Dokotera ny raiko, saingy nilalao piano izy ary tiany Frederic Chopin. Fony mbola zaza aho dia nandeha natory tao amin'ny efitranoko faharoa, niaraka tamin'ny tadin'ny Chopin nanako teo amin'ny tohatra.
Rehefa nandre voalohany ny rock indostria aho Nine Inch Nails (NIN), Nanaitra ahy ny amin'ny hira sasany, na eo aza ny gadona, ny gadona mekanika, nisy kalitao melodoly melodoly tsara izay nampahatsiahy ahy an'i Chopin. Tsikaritro ihany koa fa ny fitendry amin'ny hira NIN, nolalaovin'i Reznor, dia nampahatsiahy ahy ny piano an'i Chopin, miaraka amina famerenan-dratsy sy alahelo. Nanamarika izany aho Trent Reznor, ny mpitarika sy ny tononkira voalohany amin'ny Nails Inch Nails, dia nitovy tamin'i Chopin.
Nandritra ny fotoam-pivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson dia nanontany an'i Ahtun Re aho hoe i Frederic Chopin dia teraka indray ao amin'ny Trent Reznor. Nilaza i Ahtun Re fa i Reznor no teraka tao amin'ny vatana vaovao ao Chopin.
Talenta taloha sy fomba mozika taloha: Trent Reznor's Chopinesque Hurt & Lohahevitra ho an'ny Tambazotram-pifandraisana
Hira iray izany Resnor nanoratra sy nanatanteraka azy dia nahazo alalana Hurt, izay ho ahy dia maneho ny fanehoana an'i Chopin ao amin'ny mozikan'i Reznor. Henoy ny piano piano an'i Trent, izay maharitra mandritra ny ankamaroan'ny horonan-tsary, ary jereo raha maheno ny fanahin'i Chopin ao anaty naoty ianao. Ary koa, Nanao dikan-teny i Johnny Cash Hurt izay afaka mitondra iray amin'ny ranomaso.
Trent Reznor koa dia nanoratra ny feon-kira tamin'ny sarimihetsika Ny tambajotra sosialy, miaraka amin'i Atticus Ross. Nahazo mari-pankasitrahana Academy ny roa tamin'izy ireo. Ho an'ireo izay mahita ity sarimihetsika ity dia henoy ny mozikan'ny seho fanokafana. Na dia tsy fantatro na i Reznor sy i Ross no niara-nanoratra an'ity sombin-tantara ity na namorona ny feon-kira ny iray tamin'izy ireo, amin'ity mozika ity dia henoko ny tanan'i Frederick Chopin. Henoy ny kinova piano an'ny Ny tetikasa ara-sosialy Main Theme.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Ny rafitry ny endrik'i Frederic Chopin dia mifanaraka amin'ny an'ny Trent Reznor.
Talenta taloha momba ny fiainana taloha: Ny talenta mozikan'i Chopin dia nozaraina tao amin'ny fanomezam-baovao mozika Reznor.
Fiovan'ny Fivavahana, Nationality na Fiaraha-monina Ethique avy amin'ny Fahatongavana ho nofo iray hafa: Teraka tany Polonina i Chopin, raha teratany Etazonia i Trent Reznor.